May 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 May 31, 2019 0
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu soo qaataa mawaadiic muhim ah. Todobaadkan waxaa lagu soo qaatay Axkaamta Ciidul-Fidriga. Halkan Ka Degso…
Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo Ee Radio ALfurqaan .
Axmad	 May 31, 2019 0
Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 31 05 2019
Axmad	 May 30, 2019 0
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen weliba marka laga reebo habeenka Sabtida, ka baxa idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa xaaladda Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Halkan ka dhagayso…
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah: Sheekh Cali Katiin(Dhageyso 23)
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah waa kitaab qayim ah oo si gaar ah u taabanaya haweenka muslimaaka ah, waxaana Idaacadda Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta Islaamka. Halkan ka dhagayso Dersiga 23-aad ee…
Kitaabka Qasasul Anbiyaa; Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin (Dhagayso 26)
Dhagayso Warka Duhur.
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Duhur 30 05 2019
Magaalada baraeysan ee Makka Al Mukarrama ee dhulka Xaraneynka waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha carabta iyo kuwa caalamka islaamka. Shirka waxaa soo qaban qaabiyay maamulka Aala-sucuud, waxaana boqorka maamulkaas…
Howlgallo ka dhacay Shabeellaha hoose, Jubbooyinka,Hiiraan iyo Muqdisho.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay fuliyay silsilado weeraro ah oo lagu beesaday ciidamada Shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka. Mujaahidiinta ayaa weeraray saldhig ay degmada Qoryoolay ee Shabeellaha hoose ku…